पोखरामा २ लाख भेटियो, ‘मालिक’ भेटिएन
काठमाडौं, १४ जेठ । पोखराको चिप्लेढुङ्गामा २ लाख रुपैयाँ भेटिएको छ । जेठ १० गते २ फरक-फरक ठाउँमा झरेको अवस्थामा तारा लुईटेल र गीता अधिकारीले उक्त रकम भेट्टाएका हुन् ।एक हजारको नोट सय-सय वटा भएको २ वटा बण्डल आफूहरुले भेट्टाएको तारा लुईटेलले जानकारी दिइन् । भेट्टाएको रकम फिर्ता गर्ने ईच्छा
भोलि गणतन्त्र दिवस,७ सय ५९ वटा कैदीहरुलाई रिहा
काठमाडौं, १४ जेठ । सरकारले यस वर्ष नेपाल रत्न पदक वि.पी. कोइरालालाई प्रदान गर्ने भएको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले वि.पी. कोइरालालाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न पदकबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले राष्ट्र गौरव पदक महेन्द्रनारायण निधिलाई प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर भोलि सोमबार राष्ट्रपति
रसुवाको नेसिङमा बेवारिसे शव भेटियो..
रसुवाको पार्वतीकुण्ड–२ नेसिङमा बेवारिसे शव भेटिएको छ । अन्दाजी ४२ वर्ष जतिको देखिने एक पुरुषको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटना बारे अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीको भनाई छ । शवको प्रकृति हेर्दा नेसिङस्थित भिरबाट लडेर ज्यान गएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । मृतकको सनाखत हुन नसकेको हुँदा आवश्यक अनुसन्धान
आफनै बन्दुकले लियो ज्यान
काठमाडौं, १४ जेठ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–३ मा आफैँले बोकेको भरुवा बन्दुकका कारण ज्यान गएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ घारामहभिर स्थित ससुराली घरमा बस्दै आएका ३४ वर्षीय हिरालाल पुनको शनिबार मृत्यु भएको हो । हिरालाल २५ वर्षीय खमबहादुर वुर्जा र २० वर्षीय बिवेक शेरपुन्जासँगै घाराखोला भन्ने जंगलमा भरुवा बन्दुक लिई सिकार
फर्निचर पसलमा लागेको आगो सारा गाउँले र प्रहरीले २ घण्टापछि बल्ल निभाए
जेठ १४, २०७४ नेपालगन्ज : नेपालगन्जको धम्बोझी चोक नजिक रहेको श्रेया इन्टेरियल प्रालिमा लागेको आगो नियन्त्रणमा २ घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। एक पसलमा लागेको आगो करिब दुई घण्टादेखि प्रयास भएपनि पूर्ण रुपमा निभिसकेको छैन। पंकज श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको श्रेया इन्टेरियलमा रहेका कार्पेट र फर्निचर जलेर नष्ट भएका छन्। उक्त आगो
आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा – को हुन् पाइलट पारस ?
काठमाडौं – पाइलट भएर आकाशमा ९ हजार ६ सय ६८ घन्टा उड्दासम्म ४८ वर्षीय पारसकुमार राईलाई केही भएन। तर, शनिबार दिउँसो १ :३० बजे काठमाडौंबाट उडेको गोमा एयरको नाइन एन एके वाइ कल साइन विमान सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा ल्याण्ड गर्नै लाग्दा अनियन्त्रित हुँदा दुर्घटनाग्रस्त भयो। विमानको अगाडि भाग भुइँमा जोतिएपछि
महावीर पुनको नौलो तरंग ! बेच्दैछन् आफ्नै पदकहरु
काठमाडौं, १४ जेठ । राष्ट्रलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधि निर्माण गर्दैै विकास अभियानमा लाग्न राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्र गठन गरेका सामाजिक अभियान्ता महावीर पुनले आफुले पाएका राष्ट्रिय अन्र्तराष्टिय पदक विक्रीमा राखेर नौलो तरंग ल्याएका छन् । आविष्कार केन्द्रमार्फत नयाँ योजना तय र प्रविधित उपलब्धि हासिल गर्न लागिपरेका महाावीर सरकारसंग आवशयक सहयोगका
तपाईको आजको राशिफल : बि.स.२०७४ जेष्ठ १४ गते , आईतबार,
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ। सानो प्रयत्नले पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ। कृषिकर्म र व्यावसायिक काममा केही लगानीपछि फाइदा हुनेछ। प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका छ। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ। प्रतिस्पर्धी
६५ वर्ष पहिले यस्तो थियो काठमाडौँ, हेर्नुहोस् रोचक तस्बिरहरु
काठमाडौँ १३ जेठ । नेपालका चर्चित फोटोग्राफर स्वर्गीय टोनी हागनले १९५० को दसकमा काठमाडौँ आसपास खिचिएका सुन्दर तस्बिरहरू न्युरोड गेट : विस १९६७ सालतिर काठमाडौको न्युरोड छिर्ने मुख्य गेट । काठमाडौंको बौद्धनाथ भक्तपुरको कमलबिनायक पोखरी कोपुण्डोल र थापाथली जोड्ने बागमती पुलबाट पश्चिमतर्फको दृश्य कोपुण्डोल र थापाथली जोडने पुल काठमाडौंको यट्खाबहालमा नेवारी
अरिङ्गालले टोकेर एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं, १३ जेठ । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा अरिङ्गालले टोकेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ५९ वर्षीय नरबहादुर परियार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। अरिङ्गालले टोकेर घाइते भएका नरबहादुरको दमौली अस्पतालमा उपचार हुँदाहुँदै दिउँसो चार बजे मृत्यु भएको हो । अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर घरतिर गइरहेका नरबहादुरलाई बाटोमा